नयाँ मिस नेपाल शृङ्खला खतिवडाका १५ फोटो – MySansar
नयाँ मिस नेपाल शृङ्खला खतिवडाका १५ फोटो
Posted on April 12, 2018 April 12, 2018 by Salokya
हेटौडाकी २२ वर्षीया शृङ्खला खतिवडा नयाँ मिस नेपाल बनेकी छिन्। उनले मिस वर्ल्डमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछिन्। संघीय सांसद विरोध खतिवडा र प्रदेश सांसद मुनु सिग्देलकी छोरी शृङ्खला ५ फिट ६ इन्च अग्ली छिन्। आर्किटेक्टमा स्नातक उत्तीर्ण उनले २०१६ मा भएको एसियन पेन्ट्स डिजाइन कम्पिटिसनमा आर्किटेक्चर स्टुडेन्ट एवार्डसमेत जितेकी थिइन्। हेरौँ उनका १५ फोटो।
सबै फोटो उनका फेसबुक र इन्स्टाग्रामबाट लिइएका हुन्।
3 thoughts on “नयाँ मिस नेपाल शृङ्खला खतिवडाका १५ फोटो”
Shyam Nepali says:
राम बाबु जस्तै मान्छेले हो जेमा पनि जात देख्ने | किन र? हिजो सधै मिस वर्ल्डमा मिस नेपाललाई ए यो त नेवार हो वोट दिन हुन्न भने हो वोट दिने मान्छेहरुले ? सिधा भन्दा सबै बाहुन छेत्रीले? कस्तो जेमा पनि जात देख्ने र जातियताको तास फ्याल्ने प्रवृत्ति बढेको? जिन्दगीमा जात र धर्मभन्दा माथी त उठेर हेर, जिन्दगीका सारा समस्या हरु कसरी एक आपस मा मिलेर सुल्झाउन सकिन्छ |
सालोक्यजी पनि म जस्तै सुन्दरताको पुजारी हुनुहुँदो रहेछ, एक दिन बसेर संगै भेज म:म: खानु पर्छ है!
यस पाली चाहिं खस बाहुनहरुको मुख टाल्यो । नेवारले िजतेको भए खस बाहुन पत्रिकाहरुले पनि धुमधामकासाथ िबरोध गरिन्थ्यो । सायद िमडियाहरुले त समाचारै पनि देला िक नदेला िबरोध स्वरुप ।